လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမေ့ရမှာလဲ?…. – Messi Club
ဒီမေးခွန်းက မေရီ့ဆီအမေးများတဲ့ မေးခွန်းထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းမေးထား သူတွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြန်မဖြေနိုင်လို့ ပေ့ခ်ျမှာပဲ ဖြေပေး လိုက်ပါ မယ်နော်။
ကြိုပြောရမှာက မေရီက အချစ်ရေးမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာမကြီးတော့ မဟုတ် ရပါဘူးနော်။ 😅လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာ လိုက်စားပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးနေရုံ ပါနော်။ အဲတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမေ့ ရမှာလဲ?🤔
ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ အသက်ရှင်နေသ၍၊ ကိုယ့်မှတ်ဉာဏ်က ကောင်းနေသရွေ့တော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမှ မေ့လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
😓ဒီစကားကို ကြားလိုက်ရတော့ အသည်းကွဲလို့ ခံစားနေ ရတဲ့ ကြားထဲက ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်ပျက် သွားမိလား? စိတ်မပျက် ပါနဲ့အုံး။ ဆက်ဖတ်ပါ။ 👇လူတစ်ယောက်ကို မေ့အောင်လုပ်လို့ မရပေမယ့် အဲ့လူ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ခံစားချက် ကိုတော့ ပေါ့သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
ခုအရမ်းကို ခံစားနေရ တယ် ဆိုတာ က ခံစားချက်ပြင်းထန်လို့ ခံစားနေ ရတာပါ။အဲတော့ ခံစားချက်ပေါ့အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
၁။ ကိုယ်မေ့ချင်တဲ့သူကို မေ့ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။ မေ့ဖို့ကြိုးစားလေ၊ သတိရလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပါ။ သူက ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ဝင်လာချိန်မှာ “သြော် သူ့အကြောင်း ငါ့ခေါင်းထဲဝင်လာပြန်ပြီ။” ဆိုပြီး ဒီတိုင်းလေး အသိအမှတ်ပြုပေးပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။
၂။ ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ဆီဖြည့်ပေးမယ့် သီချင်းမျိုးကိုလုံးဝနားမထောင်ပါနဲ့။ ☠အသည်းကွဲ ချိန်မှာ အသည်းကွဲ သီချင်းနားထောင်ရတာက အရမ်းကို Feel လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့်
ကိုယ်က အသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက် ကနေ တကယ် ရုန်းထွက်ချင်ရင် အဲ့ခံစားချက်ကို အားဖြည့်ပေးမယ့် သီချင်းမျိုးကို ရှောင်ပါ။ မြူးကြွတဲ့ DJ သီချင်းတွေ ပဲဖွင့်ထား လိုက်ပါ။💃🕺
၃။ အသည်းကွဲချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်စွမ်းအင်က အရမ်းကို ပြင်းထန်တယ်။တစ်ချို့က ဒီစွမ်းအင်ရဲ့ ဝါးမျိုခြင်းကို ခံလိုက်တယ်။တစ်ချို့က ဒီစွမ်းအင်ကို ပြန်လည်အသုံးချလိုက်တယ်။
စွမ်းအင်ရဲ့ဝါးမျိုခြင်းကို ခံတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အသည်းကွဲလို့ အလုပ်အကိုင်ပျက်၊ တငိုငိုတရီရီနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖျက်စီးနေတာ မျိုးတွေပါ။
စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်အသုံးချတယ် ဆိုတာကျ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်က သိပ်မလှလို့ ပစ်ခံ သွားရတာမျိုးဆို မခံချင်စိတ်နဲ့ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်
ရအောင် ကြိုးစားတာ၊ ကိုယ်က မချမ်းသာလို့ ပစ်ခံရတာမျိုးဆိုရင် မခံချင်စိတ်နဲ့ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပစ် လိုက်တာ။ အသည်းကွဲလို့ တမူထူးတဲ့ အနုပညာတွေ ဖန်တီးလိုက်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း အပြင်လောကမှာ အများကြီး ရှိပါ တယ်။
အဲဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ခံစားချက်လျော့ကျအောင် လုပ်ဖို့က ကိုယ့်အာရုံကို တစ်ခြားဖက်ကို လည်း လွဲပေးရမှာပါ။ ကျောင်းတက်နေ ရင်လည်း ကျောင်းစာဖက်ကိုပေါ့၊ အလုပ်လုပ်နေ ရင်လည်း အလုပ်နဲ့ တစ်ခြားလေ့လာသင်ယူ လို့ရတဲ့ ပညာရေးဖက်တွေကိုပေါ့။
၄။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သစ်တွေ ထပ်ရှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Network ကိုတိုးချဲ့ပါ။ဟိုနေ့ကတောင် Facebook ပေါ်မှာ သူများ Share ထားတဲ့ စာတိုလေး တစ်ခုတွေ့မိပါရဲ့”အချစ်ဆုံးနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့် ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အချစ်ဦးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
”ဆိုပြီးအဲတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးနေမယ် ဆိုရင် တန်ဖိုးပိုရှိပြီး တန်ဖိုးထား တတ်တဲ့ သူနဲ့ ဆုံတွေ့ရမှာပါ။
၅။ လူ့ဘဝဆိုတာ သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်း ရတဲ့ လမ်းမဟုတ်ဘူး။ (သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းလို့ ရရင် လူတွေအရမ်းပျင်းသွားကြမှာ စိုးလို့ စူးငြောင့်ခလုတ်တွေ လုပ်ထားပေး တာထင် တယ်။
အဲတော့ ငိုတလှည့်၊ ရီတလှည့်ဖြစ်ရတဲ့ ဘဝမှာ ငိုခြင်းထက် ရီခြင်းက ပိုများအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ မျက်ရည်တွေ သုတ်ပြီး နာကျင်မှုကနေ ရုန်းထ လိုက်ပါတော့နော်။
No matter what, keep on moving!ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှေ့ဆက်လျှောက် လှမ်းနေ ပါ။လို့ ပြောရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ် ပါတယ်နော်။ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် 💛သက်တန့်(မေရီ)
ဒီမေးခှနျးက မရေီ့ဆီအမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးထဲက တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးမေးထား သူတှကေို တဈယောကျခငျြးစီ ပွနျမဖွနေိုငျလို့ ပခြေျ့မှာပဲ ဖွပေေး လိုကျပါ မယျနျော။
ကွိုပွောရမှာက မရေီက အခဈြရေးမှာ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာမကွီးတော့ မဟုတျ ရပါဘူးနျော။ 😅လူတှရေဲ့စိတျခံစားခကျြကို စိတျဝငျစားလို့ လလေ့ာ လိုကျစားပွီး ပွနျလညျမြှဝပေေးနရေုံ ပါနျော။ အဲတော့ လူတဈယောကျကို ဘယျလိုမေ့ ရမှာလဲ?🤔
ပထမဆုံး ပွောခငျြတာကတော့ အသကျရှငျနသေ၍၊ ကိုယျ့မှတျဉာဏျက ကောငျးနသေရှတေ့ော့ လူတဈယောကျကို ဘယျလိုမှ မလေို့ရမှာ မဟုတျပါဘူး။
😓ဒီစကားကို ကွားလိုကျရတော့ အသညျးကှဲလို့ခံစားနေ ရတဲ့ ကွားထဲက ပိုပွီးတော့တောငျ စိတျပကျြ သှားမိလား? စိတျမပကျြ ပါနဲ့အုံး။ ဆကျဖတျပါ။ 👇လူတဈယောကျကို မအေ့ောငျလုပျလို့မရပမေယျ့ အဲ့လူ အပျေါမှာ ရှိတဲ့ခံစားခကျြ ကိုတော့ ပေါ့သှားအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။
ခုအရမျးကို ခံစားနရေ တယျ ဆိုတာ က ခံစားခကျြပွငျးထနျလို့ ခံစားနေ ရတာပါ။အဲတော့ ခံစားခကျြပေါ့အောငျ ဘယျလို လုပျရမှာလဲ?
၁။ ကိုယျမခေ့ငျြတဲ့သူကို မဖေို့ မကွိုးစားပါနဲ့ ။ မဖေို့ကွိုးစားလေ၊ သတိရလဖွေဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ပါ။ သူက ကိုယျ့ခေါငျးထဲ ဝငျလာခြိနျမှာ “သွျော သူ့အကွောငျး ငါ့ခေါငျးထဲဝငျလာပွနျပွီ။” ဆိုပွီး ဒီတိုငျးလေး အသိအမှတျပွုပေးပွီး ကိုယျလုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျပါ။
၂။ ကိုယျခံစားနရေတဲ့ ခံစားခကျြကို ဆီဖွညျ့ပေးမယျ့ သီခငျြးမြိုးကိုလုံးဝနားမထောငျပါနဲ့။ ☠အသညျးကှဲ ခြိနျမှာ အသညျးကှဲ သီခငျြးနားထောငျရတာက အရမျးကို Feel လို့ကောငျးတယျဆိုတာ မှနျပမေယျ့
ကိုယျက အသညျးကှဲတဲ့ ခံစားခကျြ ကနေ တကယျ ရုနျးထှကျခငျြရငျ အဲ့ခံစားခကျြကို အားဖွညျ့ပေးမယျ့ သီခငျြးမြိုးကို ရှောငျပါ။ မွူးကွှတဲ့ DJ သီခငျြးတှေ ပဲဖှငျ့ထား လိုကျပါ။💃🕺
၃။ အသညျးကှဲခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ခံစားခကျြစှမျးအငျက အရမျးကို ပွငျးထနျတယျ။တဈခြို့က ဒီစှမျးအငျရဲ့ ဝါးမြိုခွငျးကို ခံလိုကျတယျ။တဈခြို့က ဒီစှမျးအငျကို ပွနျလညျအသုံးခလြိုကျတယျ။
စှမျးအငျရဲ့ဝါးမြိုခွငျးကို ခံတယျဆိုတာ ဘယျလိုလဲဆိုတော့ အသညျးကှဲလို့ အလုပျအကိုငျပကျြ၊ တငိုငိုတရီရီနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဖကျြစီးနတော မြိုးတှပေါ။
စှမျးအငျကို ပွနျလညျအသုံးခတြယျ ဆိုတာကြ ဘယျလိုလဲ ဆိုတော့ ကိုယျက သိပျမလှလို့ ပဈခံ သှားရတာမြိုးဆို မခံခငျြစိတျနဲ့ လှပတဲ့ခန်ဓာကိုယျ
ရအောငျ ကွိုးစားတာ၊ ကိုယျက မခမျြးသာလို့ ပဈခံရတာမြိုးဆိုရငျ မခံခငျြစိတျနဲ့ အောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားပဈ လိုကျတာ။ အသညျးကှဲလို့ တမူထူးတဲ့ အနုပညာတှေ ဖနျတီးလိုကျနိုငျတဲ့ အနုပညာရှငျတှလေညျး အပွငျလောကမှာ အမြားကွီး ရှိပါ တယျ။
အဲဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျပျေါမှာ ရှိတဲ့ခံစားခကျြလြော့ကအြောငျ လုပျဖို့က ကိုယျ့အာရုံကို တဈခွားဖကျကို လညျး လှဲပေးရမှာပါ။ ကြောငျးတကျနေ ရငျလညျး ကြောငျးစာဖကျကိုပေါ့၊ အလုပျလုပျနေ ရငျလညျး အလုပျနဲ့ တဈခွားလလေ့ာသငျယူ လို့ရတဲ့ ပညာရေးဖကျတှကေိုပေါ့။
၄။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး သဈတှေ ထပျရှာပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ Network ကိုတိုးခြဲ့ပါ။ဟိုနကေ့တောငျ Facebook ပျေါမှာ သူမြား Share ထားတဲ့ စာတိုလေး တဈခုတှမေိ့ပါရဲ့”အခဈြဆုံးနဲ့ဆုံတှခှေ့ငျ့ ရအောငျ လုပျပေးလိုကျတဲ့ အခဈြဦးကို ကြေးဇူးတငျ ပါတယျ။
”ဆိုပွီးအဲတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားပွီး ကိုယျ့တနျဖိုးကို မွှငျ့တငျပေးနမေယျ ဆိုရငျ တနျဖိုးပိုရှိပွီး တနျဖိုးထား တတျတဲ့ သူနဲ့ ဆုံတှရေ့မှာပါ။
၅။ လူ့ဘဝဆိုတာ သာယာဖွောငျ့ဖွူးစှာနဲ့ လြှောကျလှမျး ရတဲ့ လမျးမဟုတျဘူး။ (သာယာဖွောငျ့ဖွူးစှာနဲ့ လြှောကျလှမျးလို့ရရငျ လူတှအေရမျးပငျြးသှားကွမှာ စိုးလို့ စူးငွောငျ့ခလုတျတှေ လုပျထားပေး တာထငျ တယျ။
အဲတော့ ငိုတလှညျ့၊ ရီတလှညျ့ဖွဈရတဲ့ ဘဝမှာ ငိုခွငျးထကျ ရီခွငျးက ပိုမြားအောငျ လုပျဆောငျပါ။ မကျြရညျတှေ သုတျပွီး နာကငျြမှုကနေ ရုနျးထ လိုကျပါတော့နျော။
No matter what, keep on moving!ဘာပဲဖွဈဖွဈ၊ ရှဆေ့ကျလြှောကျ လှမျးနေ ပါ။လို့ ပွောရငျးနဲ့ နိဂုံးခြုပျ ပါတယျနျော။ ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့ 💛သကျတနျ့(မရေီ)